Tylany's Show ~ Journey-Assist - Inona no hojerena ao Pattaya
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Tylany's Show
Famerenana ny fampisehoana Tiffany any Pattaya
Tiffany Aseho amin'ny sari-tany
Toerana marina manakaiky ny seho Tiffany
Tiffany Asehoy sary sy horonan-tsary ao Pattaya
Hotely akaikin'ny Tiffany Show
Pattaya Tiffany Asehoy ny valiny (Google reviews)
Pattaya Tiffany Asehoy ny valiny (Tripadvisor.ru)
Tiffany Show any Pattaya. Lediboi. Overview
Io no anaran 'ny iray malaza' izao tontolo izao any Pattaya fampisehoana transvestite (ladyboys - ledyboys). Ity dia tantara ara-tantara voalohany amin'ny fampisehoana any Azia Atsimo Atsinanana. 45 taona izay no lasa hatramin'ny voalohany!
Tiffany Show Tantara
Ny tantaran'ny fampisehoana Tiffany dia nanomboka talohan'ny taom-baovao 1974 vaovao ary tamin'ny voalohany dia "fampisehoana iray" izany.
Avy eo, niverina tamin'ny Desambra 1973, sambany tany Azia Atsimo Atsinanana, dia nisy fampisehoana lehilahy telo mitafy valaret amin'ny fitafiana vehivavy. Natao tao Pattaya io fampisehoana io (mbola tsy nisy tanàna niainana momba ny fizahantany) ary natokana ho amin'ny fialantsasatra amin'ny taom-baovao ho avy.
Ity fampisehoana kely ity dia nahagaga ny mpijery tamin'izany fotoana mbola tsy za-draharaha tamin'izany fotoana izany tamin'ny fomba tsy manara-penitra, ny fahitana sy ny famirapiratra. Nanimba ireo stereotaody izay mety ho mpiasan'ny toeram-pambolena manaraka ny lovantsofina ihany ny lehilahy tsotra tany Thailand.
Ny fahombiazana dia nanentana ny mpisehatra .. ary izany no namaritana ny hiafaran'ny seho.
Nandritra ny efatra taona sy tapany, dia niova sy nihamaro ny fiforonan'ilay tarika, ary efa nitombo ny isan'ny mpikambana ato. Any avaratry Pattaya izy ireo dia manana ny volon'izy ireo fotsy fotsy ny oram-panala misy haingon-trano voaravaka ary ny seho ataon'izy ireo dia mitsidika olona hatramin'ny telo arivo sy mihoatra tapitrisa olona efa herintaona!
Fampitaovana mahafinaritra, mahafinaritra, akanjo miloko sy kojakoja miovaova dia lasa ampahany manan-danja amin'ny fampisehoana.
Ankehitriny, ny Tiffany Show dia iray amin'ireo seho folo malaza indrindra eran'izao tontolo izao!
Rating momba ny seho tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao:
1) Moulin Rough (Paris, Frantsa)
2) Siegfried & Roy (Las Vegas, Etazonia)
3) Mysters (Las Vegas, Etazonia)
5) Phuket Fantasy (Phuket, Thailand)
6) Moscow Show (Rosia)
7) Oahu Show (Hawaii, Etazonia)
9) Sand Castle (Tumon Bay, Guam)
Androany, ny fampisehoana Tiffany dia mitranga ao amin'ny efitrano iray misy fitaovana maoderina sy teknolojia maoderina, ahafahan'ny mpijery olona 1 000. Mpanakanto mihoatra ny 100 no mandray anjara amin'ilay seho!
Inona no hitranga amin'ny fampisehoana?
Toa tsara tarehy ilay fampisehoana. Raha ny fomba dia tsy tokony hafangaro amin'ny fampisehoana olon-dehibe, izay atao ao Pattaya ihany koa (mandeha Lalana mandeha an-tongotra sy any an-kafa any Pattaya).
Tiffany Show dia fampisehoana hatsarana amin'ny fandraisana anjaran'ny mpanakanto transitite matihanina. Tsy misy ny haratsiam-pitondran-tena ao, na dia ny zaza dia 12 taona monja aza no avela.
Tamin'ny taona 2001, ny fampisehoana Tiffany aza dia nahazo toerana faha-4 teo amin'ny laharana fampisehoana malaza eran'izao tontolo izao, resy tamin'ny Paris Moulin Rouge sy fampisehoana roa Las Vegas.
Amin'izao fotoana izao dia misy vokatra 9, ny faharetany dia 1,5 ora.
Sary an'ny sary sy ny sary mihetsika Voarara ny lalantsara (manara-maso akaiky izany izy ireo) na izany aza, amin'ny faran'ny fampisehoana dia azo antoka fa hivoaka eny an-dalambe ny mpanakanto izay ahafahan'izy ireo maka sary miaraka aminy, raha tsy misy afa-tsy amin'ity sarany fanampiny ity no hotakiana.
Tiffany fampisehoana na Asehoy i Cabaret Alcazar
Araka ny famerenana sy fampitahana marobe, mpifaninana mivantana Asehoy i Cabaret Alcazar hafa ao amin'ny seho sy choreography somary tsara kokoa. Amin'ny vidiny mitovy. Fa ny hevitra ao amin'ny roa tonta dia mitovy.
Eo amin'ny trano izay anaovana ny fampisehoana Tiffany koa, misy ny fifampitifirana izay ahafahan'ny tsirairay mitifitra amin'ny basy tena izy.
Fandefasana fandaharana. Fomba fandidiana
Tiffany Show Passes isan 'andro.
Misy fampisehoana telo isan'andro: 18.00 p.m. 19.30. 21.00 p.m.
Seho fanampiny (mandritra ny fetim-pirenena) 16.30 sy 22.30
Halavan'ny fandefasana 75 mankany 90 minitra.
Aorian'ny fampisehoana dia azonao atao ny maka sary miaraka amin'ireo mpanakanto fampisehoana, izay afaka maka fotoana ihany koa, satria matetika dia misy olona te-hanana.
Tiffany Show Prices
Ny salan'isa sada amin'ny fitsidihana seho Tiffany dia 600 baht.
Ny tapakila fividianana, anisan'izany ny famindrana dia azo atao any Pattaya amin'ny toerana maro (amin'ny masoivoho fitsangatsanganana, amin'ny fandraisam-bahiny amin'ny hotely, amin'ny mpivarotra amoron-dàlana), raha toa kosa ny vidiny any amin'ny toerana samy hafa.
Ny mahamarika azy dia mahasoa kokoa ny mividy tapakila tsy ao amin'ny biraon'ny birao iraisana, fa any amin'ny toerana hafa any Pattaya.
Ny ankamaroan'ny famindrana dia tafiditra ao anatin'ny vidin'ny tapakila na izany aza, afaka miditra amin'ny efitrano fampisehoana Tiffany ianao ary amin'ny alàlan'ny taxi. Ao amin'ny Pattaya 2 Street no misy ny fananganana ity seho ity.
Ny sary taorian'ny fampisehoana miaraka amin'ireo tovovavy kely (mpanakanto avy amin'ny fampisehoana Tiffney) dia avy 100 Baht.
Mitsidika TSY MISY AZY AZY ankizy latsaky ny 12 taona. Na dia tsy misy mijery manokana aza.
Aiza no misy azy. Ahoana no hahatongavana any. Fampahalalana mifandray
Tranonkala ofisialy https://www.tiffany-show.co.th/
-tserasera fandefasana tapakila eo amin'ny seho - http://tiffany.cloudapp.net/
Address: 464 หมู่ ที่ 9 Pattayasaisong Rd, Muang Pattaya, Distrika Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailandy
telefaonina: + 66 38 421 700
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/7E7xYnkvBjLpYNB17
Pattaya Tiffany Asehoy amin'ny sari-tany
Toerana marina manakaiky ny Tiffany Show any Pattaya
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany ahitanao ny toetrandro ankehitriny eo amin'ny tsenan'ireo mitsingevana ao Pattaya. Ao amin'ny farany ambany dia misy elanelam-potoana ahafahanao mandroso ara-potoana, ka mahatonga ny famoronana toetr'andro ho an'ny filanao.
Tiffany Show any Pattaya. Sary sy horonan-tsary
Ny hotely akaikin'ny Pattaya Tiffany Show
Pattaya Tiffany Asehoy ny hevitra (Google reviews)